Herisetra sy fifamonoana :: Adina mpivady nahafaty olona iraika ambin'ny folo • AoRaha
fifamonoana, naha­fatesana olona iraika ambin’ny folo ny disa­disa niseho tany Emagnobo, any amin’ny 85 kilaometatra andrefan’i Tolagnaro, tamin’ ny alakamisy lasa teo. Niady ny mpivady iray teo an-tanàna. Niitatra ny raharaha ka nahatonga ny herisetra ary niafara tamin’ny faty olona. Efa mila­mina ny any an-toerana, amin’izao fotoana izao, hoy ny mpitandro ny filaminana. Nampiana isa ny zandary ao amin’io tanàna io ho fisorohana ny mety ho zavatra hafa hiseho.
Voalaza fa nofatoran-dra­lehilahy tao an-trano ny vadiny, nialoha ny nandehanany. Nisy nahita ny zava-niseho ka vetivety dia nalaza teo an-tanàna. Nisy andian-dehilahy maromaro, avy eo, nilaza fa tokony hampandoavina omby io lehilahy niady tamin’ ny vadiny io. Nivory, araka izany, ny fianakavian’izy mivady. Tapaka, araka ny dina izay fitsipika fifampifehezana sy taorian’ny fivoriana natao fa omby dimy no homen’ny fianakavian’ilay lehilahy.
«Tsy nanaiky ireo andian-dehilahy izay fantatra fa nota­rihin’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny dina, fa naka an-keriny ny omby folo. Tokony ho omby dimy ihany anefa no halaina. Tezitra ny fianakaviana sy ny fokono­lona. Nanomboka ny ady, tokony ho tamin’ny roa ora sy sasany tolakandro», hoy ny vaovao avy amin’ny lehiben’ ny zandary any Tolagnaro.
Nentin-katezerana ny olona. Nitangoronan’izy ireo sady niharan’ny vono tamin’ny alalan’ny famaky sy lefona ireo andian-dehilahy nihetraketraka naka an-keriny ny omby folo. Vokany, maty ny iraika ambin’ny folo lahy.
Nampandre sy nanao tatitra tamin’ny lehibeny ny zandary miasa ao an-toerana. Nidina nanamarina sy nijery ny zava-misy ny teo anivon’ ny OMC (Organe mixte de conception) sy ny lehiben’ny zandary, ny marainan’ny sabotsy lasa teo. Notazomin’ ny fokonolona tao an-tanàna ireo razana iraika ambin’ny folo.
«Avy amina tanàna manodidina eo ihany ireo namoy ny ainy. Solontenan’ ny havan’izy ireo no noentina naka ny razana tany an-toe­rana hialana amin’ny mety zavatra hafa hitranga. Karohina hohadihadiana ny lehilahy irayvoatondro ho naniraka sy nitarika an’ireo andian-dehilahy ireo », hoy ihany ny zandary.